Ahoana ny fomba ahazoana famatsiam-bola ho an'ny Projet Open Source | Avy amin'ny Linux
Luigys toro | | Featured, GNU / Linux, soso-kevitra, Tutorials / Manuals / Tips
Ny torolàlana azo ampiharina amin'ny fanohanana ara-bola loharano misokatra, dia noforonin'i Nadia eghbal, mba hampianarana ny mpamorona, ny consultant ary ny mpandraharaha Ahoana ny fomba ahazoana famatsiam-bola ho an'ny tetikasa Open Source. Ny tanjona dia ny famenoana ny fampahalalana rehetra izay Nadia nanangona sy nanome fitaovana fanampiny ho an'ny asa lehibe nomaniny ho antsika izy.
"Miara-miasa amin'ny loharano misokatra aho, ahoana no hahitako famatsiam-bola?"
Voatanisa etsy ambany ireo ny fomba rehetra Nadia ary fantatro mba hahafahan'ny olona mahazo famatsiam-bola amin'ny asany amin'ny alàlan'ny loharano misokatra, ny lisitra dia naverina kely na hatramin'ny kely. Ny sokajy famatsiam-bola tsirairay dia mifamatotra amin'ny fandalinana tranga isan-karazany.
Ahoana ny fomba ahazoana famatsiam-bola ho an'ny tetikasa Open Source
Ireo sokajy dia tsy miavaka. Ohatra, mety misy tetikasa a fototra ary koa ampiasao fanangonam-bola manangona vola. Afaka nanao olon-kafa toro-hevitra ary koa manana bokotra fanomezana, ary koa miaraka amin'ireo fitambarana ilaina rehetra. Ny tanjon'ity torolàlana ity dia ny hanome lisitra feno amin'ny fomba rehetra afaka mandray karama ianao amin'ny fiasana amin'ny loharano misokatraTsy maintsy misafidy sy mizaha toetra izay mety aminao indrindra ianao, samy hafa ny tetik'asa sy ny toe-javatra tsirairay, izany hoe izay mety aminao mety tsy hahomby amin'ny tetikasanao.
1 Bokotra fanomezana
1.0.3 Tranga fandalinana
2.0.3 Tranga fandalinana
3 Crowdfunding (indray mandeha ihany)
3.0.3 Tranga fandalinana
4 Crowdfunding (miverimberina)
4.0.3 Tranga fandalinana
5 Boky sy entana
5.0.3 Tranga fandalinana
6 Doka sy fanohanana
6.0.3 Fandinihana tranga
7 Voakaraman'ny orinasa hiasa amin'ilay tetikasa
7.0.3 Fandinihana tranga
8 Manomboha tetikasa iray, raha mpiasa ianao
8.0.3 Tranga fandalinana
9.0.3 Fandinihana tranga
10 Serivisy amin'ny consulting
10.0.3 Tranga fandalinana
11.0.3 Tranga fandalinana
12 Fahazoan-dàlana roa
12.0.3 Tranga fandalinana
13 Vahaolana misokatra
13.0.3 Tranga fandalinana
14 Fototra sy consortia
14.0.3 Tranga fandalinana
15.0.3 Tranga fandalinana
Afaka mametraka tranokala fanomezana amin'ny tranokalanay izahay. Stripe sy PayPal dia serivisy tsara roa azonao ampiasaina handraisana fanomezana.
Kitendry fanomezana PayPal
Vitsy ny fepetra
Fametrahana mora sy asa kely fikojakojana tafiditra ao "apetraho fotsiny dia mahazoa fanomezana"
Matetika dia tsy be ny vola azo, raha tsy hoe efa nanao ezaka be ianao handrisihana ny olona hanome.
Any amin'ny firenena sasany ary ho an'ny lalàna mifehy ny serivisy fanomezana, mila manana antokon-dalàna ianao vao afaka mandray fanomezana (SFC y OpenCollective dia mpanohana ara-bola azonao ampiasaina amin'izany.)
Sarotra kokoa ny mitantana olona na mpamatsy vola iraisam-pirenena.
Indraindray dia tsy mazava ny hoe "mendrika" ny vola amin'ny tetikasa iray na ny fomba fizarana azy.
Indraindray ny tetikasa na ny orinasa dia mandefa valisoa ho takalon'ny fanaovana asa amin'ny lozisialy loharano misokatra (Ohatra: "Amboary ity bibikely ity ary manangona $ 100"). Misy tranokala maromaro manampy amin'ny fanamorana ny fametrahana sy ny fanangonana valisoa.
Misokatra amin'ny fandraisan'anjaran'ny fiaraha-monina
Ny vola dia mifamatotra amin'ny fanaovana asa manokana (toa ny fandoavana ny serivisy noho ny fanomezana)
Izy io dia mikendry indrindra ny fanaovana asa fiarovana amin'ny rindrambaiko misokatra
Afaka mamorona insentif maloto amin'ny tetikasa (ambany kalitao, mampitombo ny fanelingelenana)
Matetika ny valisoa dia tsy dia avo loatra (~ <$ 500)
Tsy manome fidiram-bola miverimberina
Fandaharana valisoa GitHub
Crowdfunding (indray mandeha ihany)
Raha manana hevitra manokana tiana hampiharina isika, fampielezan-kevitra fanangonam-bola Ny fandoavam-bola iray dia afaka manampy antsika hanangona ny vola ilainay. Na ny olona na ny orinasa dia mety vonona hanome fanomezana ho an'ny fampielezan-kevitrao.
Misy sehatra mamela anao hitantana ara-dalàna an'ireo fanomezana ireo amin'ny fomba mora sy haingana.
Asa marketing marobe no tsy maintsy atao mba hahomby ny fampielezan-kevitra.
Matetika dia tsy maintsy mifamatotra amin'ny valiny mivaingana, perks
Indrindra fa tsy be ny vola voangona (~ $ 50K indray mandeha)
Ny orinasa dia tsy mahazo aina foana amin'ny fanomezana amin'ny karazana fampielezan-kevitra.
Raha te hamatsy vola tetikasa iray eo am-panatanterahana ianao dia afaka manangana fampielezan-kevitra miverimberina amin'ny famoriam-bola amin'ny vahoaka, miaraka amin'ny fanoloran-tena ara-bola isam-bolana na isan-taona izay havaozina mandritra ny fotoana tsy voafetra (na mandra-panafoanan'ny mpanome). Ireo izay mampiasa ny tetikasanao matetika (ao anatin'izany ny olona sy ny orinasa) dia mety vonona ny hamatsy vola ny asanao.
Afaka mitantana mora foana ny fanangonana vola, ohatra, amin'ny alàlan'ny:Patreon y OpenCollective
Sarotra ny manome ny mpamatsy vola hanolo-tena amin'ny karama miverimberina (matetika dia mila marika / laza efa misy)
Sarotra ny manazava ny valiny sy ny tombontsoa azo avy amin'ny fanomezana miverimberina
Matetika tsy dia be vola (~ $ 1-4K isam-bolana)
Amin'ny ankapobeny ny orinasa dia tsy mahazo aina manome amin'ny karazana fampielezan-kevitra
Boky sy entana
Raha manam-pahaizana amin'ny lohahevitra iray mety ho hitan'ny olon-kafa mahasoa ianao, ny iray amin'ireo safidy tsara indrindra azonao hananana vola amin'ny tetikasanao dia ny fanoratana sy fivarotana boky na andiam-boky. Azonao atao ny mahita mpanonta (toa O'Reilly) na famoahana tena. Ankoatry ny fivarotana boky, ny tetikasa sasany dia mivarotra entam-barotra (oh: T-shirt, hoodies) hanohanana ny asany.
Mifandraika aminao ny valiny fa tsy amin'ilay tetikasa, ka mitazona ny fahalalahanao mamorona ianao
Izy io dia mety ho fitaovana marketing ho an'ilay tetikasa
Mety ho loharanom-bola hatrany, manomboka amin'ny fotoana hanombohanao ny tetikasanao mandra-pahavitanao azy
Matetika ny fivarotana boky dia tsy miteraka fidiram-bola ampy
Mety hanelingelina ny fampandrosoana ny tetikasa fototra
Ny famoronana boky na varotra varotra dia mety hisy vidiny mialoha
Azonao atao koa ny mamaky adihevitra iray izay nataontsika tamin'ny andro lasa Documentation maimaimpoana mifanohitra amin'ny zon'ny mpamorona sy ny fananana ara-tsaina! Satria tsy ny zava-drehetra dia rindrambaiko maimaim-poana.
CocoaPods (fanangonana vola ho an'ny fiantrana)
Doka sy fanohanana
Raha misy mpihaino marobe ny tetikasa dia azonao atao ny mivarotra sponsorship amin'ny mpanao dokam-barotra izay te-hanatratra azy ireo. Mety hanana mpihaino tena manokana ianao (oh: raha manana tetik'asa Python ianao dia azonao atao ny mieritreritra fa ny mpihaino anao dia mety ho olona mahazatra an'i Python amin'ny lafiny teknika), mba hampiasa izany ho tombontsoanao.
Ny maodelin'ny orinasa dia mifanaraka amin'ny zavatra tian'ny olona aloa
Mila ny mpihaino anao ho ampy lehibe hanamarinana ny mpanohana
Mila mitantana ny fitokisana sy ny mangarahara miaraka amin'ny tobin'ny mpampiasa ianao (ohatra. Tsy misy fanarahana)
Ny asa fitadiavana sy fitantanana mpanjifa dia mety ho sarotra tokoa
Voakaraman'ny orinasa hiasa amin'ilay tetikasa
Indraindray ny orinasa dia manakarama olona hanao fampandrosoana loharano misokatra. Mitadiava orinasa mampiasa ny tetikasa tianao hiasa. Matetika io dia fizarazarana fizarazarana (oh: orinasa 50% sy asa loharano misokatra 50%). Raha tsy izany, raha manana hevitra amin'ny tetikasa vaovao ianao, dia afaka mahita orinasa iray liana amin'ny fampiasana izay vokarinao. Amin'ireny tranga ireny dia tena ilaina tokoa ny manana traikefa voaporofo.
Misarika an'ireo manana loharano (izany hoe orinasa)
Azo mifanaraka tsara amin'ny filan'ny orinasa izany
Matetika dia misy ny "tsara vintana": misy lalana mazava sy miverimberina hahitana an'io toetra io
Ny tetikasa dia tsy maintsy efa fantatra sy ampiasaina
Afaka ny ho tonga olona tsy mandray anjara amin'ny faran'ny orinasa ianao, izay mandany vola
Ny olana momba ny fitantanana sy ny mpitarika, ny orinasa dia mety hisy fiantraikany lehibe amin'ny tetikasa
Mety hisy fiantraikany amin'ny dinamika sy ny fandanjalanjan'ny tetikasa izany
Donald Stufft + fonosana Hewlett-Packard sy Python
Rich Hickey + Cognitect ary Clojure
Manomboha tetikasa iray, raha mpiasa ianao
Tetikasa loharano misokatra marobe no natomboka ho tetikasan'ny mpiasa. Ny tetik'asa dia mety hiafara amin'ny fahombiazan'ny orinasa, fa ny fanombohana azy ho tetikasa hafa dia mety ho fomba tsara hampidirana ilay hevitra.
Raha manaraka an'io lalana io ianao dia alao antoka fa azonao ny politikan'ny orinasanao momba ny asan'ny loharano misokatra. Mampirisika ny mpiasa ny orinasa sasany hanome loharano misokatra mandritra ny ora fiasana. Ny sasany dia mety hitandrina ny asan'ny loharano misokatra ho toy ny tetikasa orinasa. Aza mieritreritra na inona na inona; manontania olona ao amin'ny orinasanao alohan'ny hanombohanao.
Ny fahalalahana manandrana hevitra vaovao nefa tsy manahy ny amin'ny karama
Mety amin'ny hevitra vaovao, andrana
Mila manao azy io ho toy ny tetik'asa hafa na ekena hiasa ao mandritra ny fotoana karama
Loza mety hananan'ny orinasa tsy mitarika
Mety hitarika amin'ny fitantanana sarotra aorian'ny laharana
Mozilla sy harafesina
Google sy Go
Facebook sy React
Ny fanomezana dia fanomezana lehibe izay tsy mitaky fandoavana. Mahazo tombony hafa ny orinasa lehibe amin'ny alàlan'ny famatsiam-bola amin'ny asany, toy ny fahalalana ny fahaiza-manaony, fanehoana ny fiantraikan'ny fihetsik'izy ireo, ny tatitra momba ny asany na ny tombony azo indrindra amin'ny hetra.
Ny fanomezana dia azo avy amin'ny toerana maro, ao anatin'izany ny orinasan-rindrambaiko, fototra, fototra iantrana, ary ny governemanta. Ny lafiny teknika sy ara-dalàna amin'ny fanomezana dia miovaova arakaraka ny olona manao azy. Ohatra, ny orinasa iray dia mety hanome anao "concession" fa raiso ara-dalàna ho toy ny faktiora mpanolo-tsaina. Ny fondant philanthropic dia tsy afaka manao fanomezana ho an'ny tsy mitady tombontsoa ihany, noho izany dia tsy maintsy ho tsy mitady tombombarotra na matetika ianao dia mila mitady fikambanana tsy miankina hanohana azy. Raha tsy mahazatra anao ny fanomezana, ny fomba tsara indrindra hahalalana ny fomba fitondran-tena dia ny miresaka amin'ny olona iray izay nahazo iray teo aloha.
Fifamatorana kely kokoa
Ny vola manome dia afaka manampy amin'ny fampifantohana ilay tetikasa mandritra ny fotoana tsy tapaka
Manome ny fahafaha-manavao sy manandrana ilay tetikasa izy
Tsy dia maro ny fototra mpamatsy vola mifandraika amin'ny rindrambaiko
Tapitra ny famatsiam-bola. Mbola tsy nahita faharetana mihoatra ny ain'ny fanomezana izy ireo
Fanohanana Source Open Django + Mozilla
Ny consulting dia mety ho fomba mora entina mamatsy vola ireo tetikasa misokatra. Manana fahalalahana bebe kokoa ianao amin'ny famolavolana ny fotoanao araka izay itiavanao (ohatra, hevitra amin'ny 30 ora isan-kerinandro ary mandany 10 ora isan-kerinandro amin'ny tetikasa loharano misokatra). Amin'ny ankapobeny, ny consultants dia mazàna mandoa vola bebe kokoa amin'ny fotoanany noho ny mpiasa satria tsy dia milamina ny asa, tsy mahazo tombony sns. Raha te-hikasa hanao an'io karazana asa io matetika ianao dia mety mila mamorona karazan-dàlana ara-dalàna hanohana azy io (An LLC na mitovy amin'izany ivelan'ny Etazonia).
Raha malaza be ny tetikasanao dia azonao atao koa ny manolotra consulting sy serivisy ho an'ilay tetikasa iray manontolo. Ohatra, ny mpanjifa dia afaka mandoa vola amin'ny fampiharana ilay tetikasa ho azy ireo, manangana zavatra mahazatra, na mampiofana azy ireo amin'ny fomba fampiasana azy.
Mila fanomanana be dia be ny consulting, amin'ny ankapobeny tsy dia mizatra tsara satria mitaky renivola-olombelona.
Ny filan'ny orinasa dia mety mitaky fotoana betsaka kokoa noho ny faniriana ka mety hanelingelina ny kaody fanoratana na asa hafa mifandraika amin'ilay tetikasa
Mety hifanohitra amin'ny fanaovana rindrambaiko izay mora ampiasaina
Ny tetikasa dia tokony ho malaza ampy ka vonona ny handoa vola amin'ny serivisy mifandraika amin'izany ny olona
Midika ny SaaS rindrambaiko ho serivisy. Ao amin'ity maodely ity, ny base code dia loharano misokatra, saingy azo atao ny manolotra serivisy fanampiny karama izay manamora ny fampiasan'ny olona ny tetikasanao. Ity dia iray amin'ireo fomba malaza indrindra ahazoana tombony amin'ny tetikasa loharano misokatra, ankoatry ny famelana ny fanabeazana anao havaozina tsy tapaka.
Azonao atao ny manangana vondrom-piarahamonina manodidina ny tetikasa misokatra ary mahazo vola amin'ny fandaniana ny serivisy manokana sy ny fampiasa omena
Io dia mamela ny tetikasa loharano misokatra hifantoka amin'ny mpampiasa sy ny filàna.
Afaka mizana isaky ny mpampiasa
matetika dia midika fa ny trano honenana tokony mora kokoa noho ny manakarama mpamorona hampandeha ny tetikasa.
Ny fananana "Dingana roa fanohanana" dia mety tsy ho faly daholo ny mpampiasa loharano misokatra.
Indraindray ny tetikasa dia manolotra mari-kaody mitovy amin'ny fahazoan-dàlana roa samy hafa: Ny iray izay sariaka ara-barotra ary ny iray izay tsy (ohatra GPL). Maimaimpoana ity farany hampiasain'iza na iza, fa ny orinasa kosa mandoa ny fahazoan-dàlana hisorohana olana ara-dalàna.
Afaka mihanika tsara ianao raha mahomby
Mety hifanohitra amin'ny famoronana lozisialy misokatra misokatra
Ny Tetikasa dia tokony ho ampy lehibe ka mila ny mpanjifa mandoa ny fahazoan-dàlana ho an'ny orinasa
Mikasika ny maodelin'ny open core, mamaritra fa ny lafiny sasany amin'ny tetikasa dia maimaim-poana, fa ny fiasa hafa dia an'ny tetik'asa ary ho an'ny mpampiasa karama ihany no misy. Matetika izany dia miasa rehefa misy ny fangatahana avy amin'ny orinasa amin'ilay tetikasa.
Mila manana zavatra azonao andoavana vola (izay midika hoe fananganana fampiasa tsy manam-paharoa).
Fototra sy consortia
Ny fototra dia fikambanana ara-dalàna afaka manaiky sy / na mandefa fanomezana. Satria ny tanjony dia tsy ny ahazoana tombony, dia mety ho safidy lehibe hanondroana ny tsy fomban'ny tetik'asa.
Tsy miandany. Ny Foundation dia miaro ny kaody ary manampy ny vondrom-piarahamonina mitantana
Fitsarana nozaraina tamin'ireo mpamatsy vola marobe
Afaka manara-dalàna ny tetikasa, mahatsapa mahazo aina kokoa ny orinasa manome ho an'ny fototra noho ny an'ny tsirairay
Sarobidy ho an'ny tetikasa lehibe ihany io
Sarotra ny mamorona araky ny lalàna sy lalàna mifehy ny firenena tsirairay.
Mitaky ezaka eo amin'ny fiaraha-monina sy fanatanterahana fahaiza-manao isan-karazany
Ny Venture capital dia endrika famatsiam-bola ho an'ireo orinasa avo lenta. Tsy toy ny fampindramam-bola amin'ny banky na amin'ny endrika famatsiam-bola hafa, ny renivohitra dia mandray fananana (fananana iray isan-jato amin'ny orinasanao) ho takalon'ny famatsiam-bola. Ny lafy ratsy dia tsy toy ny maka indram-bola fa tsy mila mandoa ny mpampindram-bolanao fa ny orinasanao. Raha mahomby ny tetikasanao, ny mpampiasa vola dia hahazo vola be amin'ny tombony azo.
Ny kapitalin'ny Venture dia "risika be sy famokarana avo", ny orinasam-pandraharahana dia mandefitra kokoa noho ny, hoy ny banky, fa mila valisoa lehibe koa izy ireo raha mahomby. Raha tsy fantatrao ny fizotran'ny renivohitra, ny toerana tsara indrindra hanombohana dia amin'ny alàlan'ny fifampiresahana amin'ireo mpandraharaha hafa na mpandraharaha nahomby tamin'ny tetikasan'izy ireo noho ny orinasam-pivarotana.
Ny fanohanana andrim-panjakana dia mety ilaina amin'ny fampiroboroboana ny orinasanao
Renivohitra betsaka azo
Ny Venture capital dia miaraka amin'ny andrasana ROI avo (izany hoe ny famerenana amin'ny laoniny ny fampiasam-bolanao amin'ny fomba haingana ary amin'ny valiny lehibe). Ny tantara dia manondro fa sarotra ara-drafitra izany ho an'ireo orinasa misokatra.
Ny renivohitra Venture dia afaka manova ny antony manosika ary manelingelina ny laharam-pahamehana
Mazava ho azy, ny tanjon'ny lozisialy maimaimpoana sy ny vondrom-piarahamonina malalaka misokatra dia ny mizara ny fahalalany sy mamorona fitaovana mamela ny fidirana amin'ny haitao malalaka sy mangarahara, saingy tsy miafina amin'ny rehetra ny fizotran'ny rindrambaiko. tranga sasany na dia ny fandaniam-bola aza, koa ny famatsiam-bola dia olana iray mampiahiahy ny ankamaroan'ny mpamorona sy ny orinasan-rindrambaiko maimaimpoana.
Tianay ho fantatra izany rafitra inona no nampiasain'izy ireo handraisana famatsiam-bola amin'ny tetikasany ary inona ny hevitrao sy tolo-kevitrao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Featured » Ahoana ny fomba ahazoana famatsiam-bola ho an'ny Projet Open Source
Yaneth Reyes dia hoy izy:
Misaotra betsaka, ny fahazoana vola ho an'ireo tetik'asa misokatra dia toa sarotra be ny mampivelatra ary vao mainka sarotra ny manangona vola ho an'ireo mpampikirakira anao
Valiny tamin'i Yaneth Reyes
Thomas Killus dia hoy izy:
Tiako ity karazana hetsika fandraisana anjaran'ny vahoaka ity, samy mahazo tombony ireo roa tonta manolotra azy sy iza no manohana azy. Tao anatin'ny andro vitsy lasa izay dia nahita tetikasa marobe amin'ity karazana ity aho hatramin'ny fanohanako mpamorona votoaty ka hatramin'ny fananganana rindrina manasaraka an'i Etazonia sy MEX. Ny fahafaha-manao dia tsy misy farany, tiako manokana ity sehatra antsoina hoe ity https://www.mintme.com ary azo atao tsara izany
Valiny tamin'i Thomas Killus